Abaninzi bakholelwa ukuba utyando luyimpembelelo enamandla yomntu, kuphela kwabakhethiweyo, ngokungahambi ngokungaqondi ukuba ubuntu bodwa. Isipho sikaThixo sinikezelwa kuwo wonke umntu, kodwa kungekhona wonke umntu onokukubonisa. Omnye ufumene intuitively ikusasa lakhe, kwaye umntu ujikeleza ngokufuna yena ngokwakhe ubomi bakhe bonke. Namhlanje, i-charisma idla ngokuqondakala njengomgangatho wobunkokeli.
Ngokomphando, ama-5% abantu anesihlwele esinjalo, kodwa bekungekho mpazamo ukubiza zonke ezinye izinto ezingabonakaliyo. Umntu onobukrakra uhlala ekhokela, nokuba ngaba umgangatho ophezulu wengqumbo yakhe ayikho inkokheli. Uhluke kukuba uziphatha ebomini, kwaye akukho ubomi obukhokelela kuye.
Umendo wemizamo eqhelekileyo
Ukufumana i-charisma yakho - iimpawu ezinamandla zomntu - akusiyo yonke into elula, kwaye ifuna ukuba ngaphandle kwangenelelo. Abantu, njengommiselo, bazisebenzise ngokwabo, ngeempawu zabo kwaye kaninzi abakwazi ukuphendula umbuzo umgangatho wabo okhangayo kakhulu. Ukukhuselwa kwengqondo kudla ngokusebenza apha, ngoko lo msebenzi awukwazi ukusombululwa ekuhambeni. Abaqeqeshi, abathi ngenxa yobuchule babo banokubona ubuhlungu obufihlakeleyo kwabanye abantu, sebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokukukhupha ekukhanyeni.
Into efunekayo ukuba uyazi, ukuqala ukukhangela i-charisma - iimpawu ezinamandla zomntu: iintloni zivale, kwaye iimpawu ezintle ziqala ukubonakalisa ngokungakhethiyo.
Ngokomzekelo, umntu onomgangatho oqinileyo - ukuthetha nabantu, uqala ukuxoxa ngokubanzi kunye nokunyanzelela kunto eqhelekileyo, kwaye umntu onomfanekiso ohlalutyo ovalwe kuye kwaye akanako ukuthetha igama. Ngoko ke, kufuneka uqale usebenze ngokuzithemba. Emva kwentshukumo-iimpawu ezinamandla zomntu, kungekhona rhoqo kwaye azikho konke ezibonakalayo.
Khumbula "kwimeko yokuphumelela ukujongana neengxaki kwaye uzama ukuthabatha isimboli ngendlela yemandla eyakunceda ukuba uphume kuyo. Esi simboli siya kukuvumela ukuba ubone iimpawu ezinamandla ezibonakalisa ngokucacileyo kwiimeko ezinzima. Ubume besimboli lunceda ukunqoba izibilini zangaphakathi. Emva koko unokucinga malunga nendlela yokunika amandla akho kubantu, indlela yokubonisa ngayo.
Unokuzama ukufumana intshutshiso yakho. Iinkqubo ziyaziwa, zilula, kodwa ngaphandle kokuthatha inxaxheba kwezobugcisa zisebenza kakuhle kuphela xa i-charisma ibonakaliswa ngokubonakalayo, kwaye umntu ulungele ukuwamkela. Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ngaphambi kokuba uthathe inkululeko, kufuneka usebenze ngokuvisisana nomntu ngamnye.
Xa umntu eqonda iimpawu zakhe ezintle, baqala ukuzibonakalisa ngokuziphatha kwabo. Ukuguquka kwemikhwa kunye nembono, nangayiphi na imeko, yile ngqwalaselo eyenziwa ngabafundi beengqondo emva kweseshoni enye ekufumaneni i-charisma.
Xa umntu eqonda kwaye amkele isithandwa sakhe, umntu unokubandakanya ukubonakaliswa kwayo yonke imiba yomfanekiso:
gabitarnom (ukhangeleka njani):
izwi (njengoko uthi):
ububele (njengoko uhamba);
kwimeko yendawo (yintoni ejikelezileyo);
izinto eziphathekayo (amakhadi omashishini, iincwadana, izinto ozinikezelayo kwaye zithwala impawu zobuntu).
Okokuqala, kukufanelekile ukugxininisa imizamo yakho kwi-1-2 imiyalelo. Kwiimpawu zeTV, ubonakaliso obaluleke kakhulu obushushu buyimpawu zesigababiti kunye nesinesthetic, kumphathi weentengiso - gabitarny kunye nesandi. Xa umntu enesithandwa - iimpawu ezintle zomntu zibonakaliswa ngokubonakalayo, abantu kulula ukuyiqonda, ehlala igalelo ekukholweni.
Umsebenzi unokuhamba ngeendlela ezahlukeneyo. I-psychologist idla ngokunika izikhokelo eziqhelekileyo, umqeqeshi angasebenza ngokubonakaliswa ngokubanzi, kuya kuba mnandi ukubonisana nomenzi wezithombe, ochwepheshe bezakhono, njl njll. Into enokuyenza umntu xa eqala ukuzithembela kumgangatho omtsha.
Ukubhenela kuye nayiphi na ingcali eyona nto ibaluleke kakhulu, kubalulekile ukuqonda oko uzimisele ukukwenza. Kumele uqale uphendule ngokwakho kumbuzo: "Ndifuna ntoni na?" Kwaye "Yintoni na?". Kwaye ngokubuza le mibuzo, kufuneka ufezekise injongo yakho. Umzekelo, fumana umntu osondeleyo kunye nomnye. Ngalo msebenzi ungaya kuchwepheshe. Oku akusebenzi nje kuphela ekudaleni i-charisma, inxulumene nayiphi na injongo kunye nomsebenzi.
Njengoko umkhuba ubonisa , kuba besetyhini kubaluleke kakhulu ukukhangela umfanekiso wakho omtsha wegabititi, ukubonakalisa intshutshiso yakho ngokusebenzisa izambatho, izixhobo kunye nezimonyo. Ulwalathiso lophando luya kunceda ukufumana uvavanyo.
Kubafazi, ukufuna umfanekiso omtsha kulula ngakumbi kunabantu. Bamele bathembele kwi-intuition kwaye baqhube ekuthengeni. Hamba izitolo uze uzame ukuqonda ukuba zeziphi iimvakalelo ezibangele ezi zinto okanye ezinye izinto. Zama ukufumana iimpahla ezibangela ngaphakathi kwakho "Ooooo!". Ezi njenjalo zibonakalisa intsingiselo yakho, inceba yakho, ngakumbi xa unxulumana nawe. Zama ukuqonda okoqobo, into oyithandayo-izinto, ukusika, umbala, iimpawu zesitayela. Ungesabi ukubheka ama-boutiques abizayo kwaye uzame kwisambatho esikwimeko yokubonisa. Ukuba uyaqonda ukuba oku kungokwakho kwaye kuhlaziywe into oyithandayo, unokufumana lula into efana nayo, kodwa ifikeleleka.
Le ndlela ayifanelekanga kubantu abanokomeleza kwengqondo. Isalathisi esingangqaliyo: abantu abanjalo banokuqhagamshela ubuhlungu kumbala omnye (ngokuqhelekileyo umnyama). Ukuqonda ubuninzi obathintekayo, kufuneka ulahle izambatho okanye umbala ozithandayo ubuncinane ngeveki uze uzame ukufumana enye imibala efanelekileyo. Oko kukuthi, ngokuzenzekelayo uziqhubekele kwiimeko ezingahambi kakuhle ukufumana intuthuzelo entsha. Nangona kunjalo, kuphela isazi seengqondo singasusa ukhuselo olunjalo, kuba ludibana neengxaki zangokwengqondo zangaphakathi.
Impembelelo yobhinqa kwintsapho
Indlela yokuthuthuzela intombi
Yintoni oyenzayo xa umphefumlo ubangela ubuhlungu, kunye neendlela ezi-5 ezandisayo zokusebenzisa imizwa yakho
Iimfestile eziphathekayo zowesifazane opheleleyo 2015: ukujonga ngokugqithiseleyo imodeli yakamuva kunye nemibala
Yenza ngokufanelekileyo ukwenza izithunzi ezimnyama
Ukulawula iintlobo zeenwele zendalo
Ukubhakabhaka amazambane athambileyo kunye ne-lime
Eyesisibhozo esikhulu sabantu
Isifundo sokuqala esikolweni kwibanga lesi-4 (iiklasi zokuqala): iziganeko kunye neengcamango zeholide elihle
I-Serum yokuyeka ixesha: iGenaissance esuka kuLa Mer